Forohana nosarihina tamin’ny afo
“Ary hoy Jehovah tamin’i Satana: hananatra anao anie Jehovah, ry Satana; eny, Jehovah izay nifidy an’i Jerosalema anie hananatra anao; tsy forohana nosarihana tamin’ny afo va ity?” Zak. 3:2
Antsoin’i Jesosy hoe forohana nosarihana tamin’ny afo ny olony, ary azon’i Satana tsara ny hevitr’izany. Ny fijaliana tsy nisy fetra niaretan’Ilay Zanak’Andriamanitra tao Getsemane sy teo Kalvary dia natao mba hahafahany mamonjy ny olony ho afaka amin’ny herin’ilay ratsy. Ny asa nataon’i Jesosy mba ho famonjena ireo fanahy ngolin’ny hatsiaka, dia toy ny fanatsorany ny tanany ho ao amin’ny afo ho famonjena azy ireo. Nitafy fitafiana maloto i Josoa, izay misolo tena ny vahoakan’andriamanitra, ary nitsangana teo anoloan’Ilay Anjely; saingy rehefa mibebaka eo anatrehan’Andriamanitra noho ny fandikana ny didiny ny olona, ary manatsotra ny tanany handray ny fahamarinan’i Kristy, dia hoy i Jesosy: “Esory aminy ny fitafiana maloto (...) ary hampiakanjoko akanjo fihaingoana hianao” (jereo ny Zak. 3:4)
Amin’ny alalan’ny fahamarinan’i Kristy irery ihany no ahafahantsika mitandrina ny didy. Ireo izay manompo an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary izay manana fanahy ory eo anatrehany tahaka ny tamin’ny andro lehiben’ny fanonerana, dia hanasa ny lambany ka hahafosty izany amin’ny ran’ny Zanak’ondry. Mitady izay hamehezana ny sain’ny olona amin’ny famitahana i Satana, mba tsy hibebahan’izy ireo sy tsy hinoany fa azo esorina aminy ny fitafiana maloto anaovany. Nahoana ianao no mifikitra amin’ny kileman-toetranao izay mahonena, ka manao izany ho sakana tsy ahafahan’i Jesosy miasa ho anao?
Mitovy amin'ny toerana nisy an’i Josoa ny toerana misy ny vahoakan’Andriamanitra rehefa mandalo fotoan-tsarotra. Tsy ho tompon-trano mihono amin’ny asa izay atao ho azy any an-danitra izy ireo. Ho tsapany fa raiketina amin’ny anarany ny fahotany, nefa koa ho fantany fa hofafana ny fahotan’ireo izay mibebaka sy mifikitra amin’ny fahamendrehan’i Kristy. Ireo izay naneho fibebahana marina noho ny ota sy mivelona amin’ny finoana an’i Kristy ka mankato ny didiny, dia hanana ny anarany voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana, ary hotononina eo anatrehan’ny Ray sy eo anatrehan’ny Anjely masina, ary hilaza i Jesosy manao hoe: “Ahy izy ireo, izay efa novidika tamin´ny rako”.